PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Uthi amavoti angafezekisa iphupho lakhe
Uthi amavoti angafezekisa iphupho lakhe
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Izindaba - THANDI ZONDI
INDONI yamanzi engupertunia Malingisa, engenele umncintiswano omkhulukazi kamrs Africa Continental, ithi kayikho into engayijabulisa njengokufinyelela esicongweni salo mncintiswano.
Le ntokazi yasemeadowlands, egoli, ithi konke lokhu kungafezeka uma ingathola uxhaso lokuvotelwa.
“Ukuwina lesi sicoco kungasho lukhulu kimina nasemphakathini engiphila kuwo. Njengamanje kunenhlangano engisebenza nayo, okuyikhaya labantwana abaphila nokukhubazeka. Kuningi okushodayo khona, engingafisa ukuba ngibathengele khona ukuze abantwana bathole ukunakekelela kahle, bafane nabanye abantu,” kuchaza yena.
Uthi ungenele lo mncintiswano ngoba ebona uhlukile kweminye.
“Ukumodela yinto engiyiqale ngisemncane ngakhula nayo kodwa ngabuye ngama. Kuthe uma ngithola ngalo mnci- ntiswano ngaba nokugqugquzeleka ngoba kawukho mayelana nobuhle nje kuphela kodwa umayelana nokufukula abesifazane nokubafundisa ukubaluleka kokuzimela,” kuqhuba yena.
Uthi angakuthokozela ukuba abantu bamvotele ngokuthumela i- sms ethi ‘mrs11’ kule nombolo ethi 47018.
Njengoba esekhethwe waba yingxenye yabangu-20, uthi uma kuqhubeka isikhathi edlulela phambili uzodinga abantu abangamxhasa ngezinto ezifana nezimpahla zokugqoka uma ehamba imicimbi, ongamenza ubuso nokunye okuningi.
Ofisa ukufaka isandla angathumela i- email ku-pertunialadypee@ gmail.com. zondit@ilanganews.co.za
U-PERTUNIA Malingisa usefinyelele kwi-top 20 kokamrs Africa Continental.